Ny yoga roa dia miala sasatra ao an-trano | Nutri Diet
Mody miala sasatra mora foana ao an-trano ny yoga
Michael Serrano | | fahasalamana
Iray amin'ireo tombontsoa marobe amin'ny fampiharana yoga mahazatra ny fialan-tsasatra. Na hainao io fifehezana io na tsia, dia andramana ireo. yoga dia miala sasatra amin'ireo andro ireo izay ahatsapanao fa manomboka miady saina aminao na ara-batana na amin'izy roa ny adin-tsaina.
Ny fihetsika voalohany dia antsoina lolo mandry ary amporisihina indrindra hanala ny fanaintainan'ny fadimbolana. Mba hanatanterahana an'io paozy io dia mila ondana ianao. Mipetraha amin'ny tany izao, aondriho ny lohalinao ary ampifanaraho ny tongotrao. Manaraka izany, mandehana midina mankany an-damosinao mankany amin'ny ondana mandra-pialan'ny lohanao sy ny tendanao ary ny lamosinao eo amboniny.
Mitazona ny tongotrao miaraka, avelao ny lohalinao hianjera amin'ny sisiny raha mbola hanome ny kirininao. Ny fitaovam-piadiana dia azo tazonina moramora amin'ny gorodona amin'ny alàlan'ny rofia manatrika na apetraho eo amin'ny kibo ny tanana iray ary ny iray kosa amin'ny fo. Tazomy fofonaina farafaharatsiny farafaharatsiny fofonaina dimy ny toerana mba handray soa amin'ny heriny mampitony sy miala sasatra.
Ny fihetsika faharoa dia antsoina tongotra nivelatra teo amin'ny rindrina. Tsotra nefa tena miabo ho an'ny olona marary tongotra, mivonto ny vodin-damosina ary lamosina mafy, aretina mahazo an'ireo miasa mandritra ny ora maro mipetraka eo amin'ny birao. Mipetraha eo anilanao santimetatra vitsivitsy avy amin'ny rindrina malama ary avy eo alefaso 90 degre ny valahanao mba hahitsy amin'ny rindrina ny tongotrao.
Avelao hipetraka moramora eo amin'ny tsihy ny soroka sy ny lohanao, ajanony ny tananao ary akimpio ny masonao. Tazomy mafy amin'ny rindrina ny tongotrao, fa raha mahatsapa tsy mahazo aina amin'ny lamosinao ambany ianao dia miparitaha kely kokoa. Makà fofonaina betsaka ary ho hitanao ny fanamaivanana ny fihenjanana ara-tsaina sy ara-batana maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Mody miala sasatra mora foana ao an-trano ny yoga
Mihinana toa tanora kokoa
Ronono moka ny safidy legioma tsara indrindra